Miverina ny trafika: andramena 87 tratra tany Amparafaravola | NewsMada
Tsy foana! Hazo sarobidy maromaro ny tratran’ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny harena lovain-jafy (Dredd) Alaotra Mangoro, niaraka amin’ny Polisim-pirenena, tany amin’ny fokontany Antanambao, kaominina Ambohimandroso, distrika Amparafaravola, ny alatsinainy 16 novambra teo.
Tratra ny olona roa, ny mpiambina sy ny sefo fokontany, hatao famotorana. Taorian’ny famotorana, fantatra fa olona roa no nitazona ireo hazo ary nitsoaka ka karohin’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Nogiazan’ny Dredd Alaotra Mangoro ireo hazo, nahitana bolabola andramena 87 isa, voamboana iray mirefy 2 metatra ary hazo tsotra telo mirefy 2 metatra.
Manamafy ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny harena lovain-jafy (MEDD) fa mazava ny hafatra napetraky ny filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, amin’ny tsy handeferana mihitsy ireo mpanao trafika hazo sarobidy toy izao. Marihina fa voasokajy ho ady heloka ny fikitihana zavamaniry na biby avy any anaty faritra arovana. Voarara tanteraka ny fikapana, ny fitaterana, ny fivarotana ary ny fanondranana any ivelany hazo sarobidy. Hiharan’ny sazy henjana izay tratra mandika ireo.